15 | April | 2017 | Danya Wadi
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ၀န်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူသို့ တစ်နှစ်တာ ရှင်းလင်း ဖြေကြားချက်ပေါ် သုံးသပ်ချက်
By danyawadi April 15, 2017 Leaveacomment
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ၀န်ကြီးဌာန၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့သတင်းစာပါ ရှင်းလင်းချက်မှာ ငြီ်မ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ဖော် ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ရှင်းလင်းထားသည်။ အစိုးရသစ်၏ ဦးတည်ချက် ပန်းတိုင်မှာ Peace (ငြိမ်းချမ်းရေး) prosperity စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိူတိုးတက်ရေး Democracy (ဒီမိုကရေစိ စနစ် ရှင်သန်ခိုင်မှာ အောင်ရေး) ဟုဖော်ပြထားသည်။ ပြည်တွင်းစစ်သည် နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော် ရှိသွားပြီ။ပြည်တွင်းစစ်ချူပ်ငြီမ်းရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ပြင်ဆင်အားထုတ်ခဲ့သည်။မပြီးဖြတ်နိုင်ခဲ့ချေ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ရှစ်ဖွဲ့နှင့်သာ NCA (National Ceasefire Agreement) အမျိူးသားအပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးစာချူပ် လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်၏ အစိုးရသစ်က ၂၁ ရာစု ပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံအမည်ဖြင့် ဆက်လက်ကြိုး ပမ်းရာ NCA လက်မှတ်ထိုးသူ ဦးရေ တိုးမလာသေးချေ။ လက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့အချိူ့နှင့် တိုက်ခိုက်မူများ […]
“ဟိန္ဒူကုလားတို့၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံကို မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်”
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ(၁၃) စာမျက်နှာ ၂၀၈ “ဟိန္ဒူကုလားတို့၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံကို မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်” Reference WIKIPEDIA The new year of many South and Southeast Asian calendars falls between 13 and 15 April, marking the beginning of spring. Tamil New Year (Puthandu) is celebrated in the South Indian state of Tamil Nadu, on the first of Chithrai (சித்திரை)(13 or 14 or 15 April). In […]